Myanmar IP Address ဖြင့် PayPal အကောင့်ဖွင့်နည်း ~ Earning Online Myanmar
Home » PROCESSOR » Myanmar IP Address ဖြင့် PayPal အကောင့်ဖွင့်နည်း
Myanmar IP Address ဖြင့် PayPal အကောင့်ဖွင့်နည်း
Free7Movies5:02:00 AM4comments
Myanmar IP Address ဖြင့် PayPal အကောင့်အား (၁၀) မိနစ်အတွင်း အလွယ်တကူ၍ Online Payment/ Online Shopping/ Online Business များအား ပြုလုပ်နည်း။ ယခုဖော်ပြမည့် နည်းလမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ PayPal အကောင့်ပြုလုပ်၍ ငွေပေးချေခြင်း(Online Payment) ၊ ငွေလက်ခံခြင်း (Get Paid), အွန်လိုင်းတွင်ငွေရှာခြင်း (Online Business)၊ အွန်လိုင်းတွင် ဈေးရောင်းဈေးဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း (Online Shopping)၊ အွန်လိုင်းမှတဆင့် အလူငွေများ ထည့်ဝင်းခြင်း (Online Donation) စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် လွတ်လပ်လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သော နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုဖော်ပြမည့် နည်းလမ်အား မြန်မာနိုင်ငံ၏ မည်သည့် အင်တာနက်လိုင်းဖြင့် မဆို အသုံးပြု၍ ရပါသည်။ ပြည်တွင်း အင်တာနက်လိုင်းမျိုးစုံဖြင့် စမ်းသပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ PayPal တွင် အကောင့်အမျိုးအစား ၃ မျိုးရှိပါသည်။ 1. Personal Account - အင်တာနက်ပေါ်တွင် ငွေသုံးရန်၊ Personal payment များအား လက်ခံရန်အတွက် သီးသန့်ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ 2. Premier Account - အင်တာနက်ပေါ်တွင် ငွေသုံးရန်၊ Online Business လုပ်ငန်းများမှ ငွေလက်ခံရန် Individual အတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ 3. Business
Account – Company များ၊ အသင်းအဖွဲ့များအတွက် ငွေပမာဏ များများ လက်ခံနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုဖော်ပြမည့် နည်းလမ်းသည် Premier Account ပြုလုပ်နည်း ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် PayPal - Premier Account ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့် Online ပေါ်တွင် ငွေသုံးနိုင်သည့်အပြင် Online မှတဆင့်လဲ ငွေလက်ခံနိုင်ပါသည်။ Online Business များ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ PayPal Button၊ Shopping Cart စနစ်များအား မိမိတို့၏ Website များ အသုံးပြုနိုင်၍ ငွေလက်ခံနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် Paypal ဖြင့် လက်ခံထားသော ငွေများကို ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူလိုပါက www.shwemoney.com သို့ ဆက်သွယ်၍ ငွေထုတ်နိုင်ပါသည်။ PayPal အကောင့် ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ။ 1. Email address တစ်ခု (Paypal တစ်ခါမှ မဆောက်ဖူးသေးသော၊ Paypal ဖြင့် တစ်ခါမှ link မချိတ်ဖူးသော Email အသစ်ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။) 2. ShweMoney Virtual VISA Card တစ်ခု (Paypal နှင့် Link မချိတ်ဖူးသော၊ Paypal တွင် တစ်ခါမှ မသုံးဖူးသေးသော Card အသစ် ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။) (Note : ShweMoney Virtual VISA Card အား www.shwemoney.com တွင် အလွယ်တကူ လျှောက်ထားရရှိနိုင်ပါသည်။) ယခုဖော်ပြမည့် နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ Myanmar IP ဖြင့် Paypal အကောင့်ပြုလုပ်ထားသူများသည် Online တွင် ငွေသုံးရာတွင် Paypal ထဲသို့ ငွေကြိုထည့်ထားစရာ မလိုအပ်ပါ။ ShweMoney Virtual VISA Card ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။ Paypal မှတဆင့် Online ငွေအသုံးပြုမှု မှန်သမျှကို Virtual VISA Card ထဲမှ အလိုအလျောက် နုတ်ယူသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အကြောင်းတခုခုကြောင့် PayPal Limited ဖြစ်သွားပါက PayPal ထဲသို့ ငွေကြိုထည့်ထားစရာ မလိုသဖြင့် ငွေဆုံးရှုံးမှု ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ ၁။ www.paypal.pl သွားရောက်ပါ။ Poland နိုင်ငံ Payal စနစ် ဖြစ်ရပါမည်။ Sign Up ပြုလုပ်ရန်အတွက် ညာဖက်အပေါ် ထောင့်စွန်းရှိ အပြာရောင် Button အား နှိပ်ပါ။
၂။ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်အဆင့်များပြုလုပ်ရာတွင် လွယ်ကူစေရန်အတွက် language အား ပြောင်းလဲပေးပါ။
၃။ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ PayPal အကောင့်စတင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် “Paypal for you” အောက်ရှိ “Get Started” Button အား နှိပ်ပေးပါ။
၄။ ဤအဆင့်တွင် PayPal အကောင့်ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များအား ဖြည့်သွင်းရပါမည်။ အချက်အလက်များအား မဖြည့်သွင်းမီ Poland Address Information နှင့် Poland ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုခု အား ကြိုတင်ရှာထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ (စာမျက်နှာ၏ နောက်တစ်မျက်နှာအား ကြိုတင်ကြည့်ရှုပေးပါရန်..)
၅။ Poland Address လိပ်စာနှင့် Phone number အား ရှာဖွေရန်အတွက် http://www.spokeo.com/Dunn+Rd+Poland+ME+addresses သို့ သွားရောက်ပါ။ ၆။ မိမိစိတ်ကြိုက် လမ်းနာမည်တစ်ခုအား ရွေးလိုက်ပါ။
၇။ နောက်တစ်ဆင့်တွင် ထိုလမ်းတွင်နေထိုင်သော လူများ၏ အချက်အလက်အား တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
၈။ စိတ်ကြိုက် နာမည်တစ်ခုအား ရွေးချယ်ပေးပါ။ ထိုသူ၏ လိပ်စာအား အောက်ပါအတိုင်း တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
အထက်ပါ ပုံအား လေ့လာကြည့်ရှုပါက Poland Address လိပ်စာအား အောက်ပါအတိုင်း တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ Address – 77 Dunn Rd City – Poland State – ME Postal code – 04274 - Poland Country ဖုန်းနံပါတ် code သည် +48 (0048) ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းနံပါတ်အရေအတွက် (9) လုံး ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အထက်ပါ ပုံအား လေ့လာ၍ ဖုန်းနံပါတ်ထည့်သွင်းရာ၌ 0048207998xxx ဟုထည့်သွင်းရပါမည်။ Example ... 0048207998775 .
၉။ အချက်အလက်များ ပြည့်စုံပြီးပါက PayPal အကောင့်အား ဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ PayPal တွင် လူကြီးမင်း၏အချက်အလက်အားထည့်သွင်းပေးပါ။ လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို အထက်ပါရှာဖွေခဲ့သည့်အတိုင်း ထည့်သွင်းပေးရပါမည်။ ထို့နောက် “Agree and Create Account” Button အား နှိပ်ပေးပါ။
၁၀။ ထို့နောက် နောက်တစ်ဆင့်တွင် အောက်ပါအတိုင်း Image Capture အား ထည့်သွင်းပေးရပါမည်။ ပုံတွင်ပြထားသည့်စာသားများအတိုင်း ထည့်သွင်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၁၁။ ထို့နောက် “Continue” Button အား နှိပ်ပေးပါ။
၁၂။ နောက်တဆင့်တွင် လူကြီးမင်း၏ Virtual VISA Card နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် အောက်ပါအတိုင်း တွေ့မြင်ရပါမည်။ Pay with my card အောက်ရှိ “Continue” Button အား နှိပ်ပေးပါ။
၁၃။ ထို့နောက် လူကြီးမင်း၏ Virtual VISA Card အချက်အလက်အား ထည့်သွင်းပေးပါ။
၁၄။ လူကြီးမင်း၏ Virtual VISA Card နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးပါက အောက်ပါအတိုင်း တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
၁၅။ လူကြီးမင်း၏ Paypal အကောင့်အား ပထမအဆင့် ပြုလုပ်ပြီးစီးသွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအဆင့်တွင် လူကြီးမင်း၏ Paypal အကောင့်အား အောက်ပါအတိုင်း တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ လူကြီးမင်း၏ Paypal အကောင့်သည် Poland နိုင်ငံလိပ်စာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသဖြင့် Default Currency မှာ Poland ငွေကြေး (PL) ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
၁၆။ ထို့အတွက်ကြောင့် Default Currency အား US Dollar အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်း “Currency Converter” တွင် Click နှိပ်ပြီး ပြောင်းလဲပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၁၇။ နောက်တဆင့်တွင် အောက်ပါအတိုင်း တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး “US Dollar” အား ရွေးချယ်၍ “Make Primary” Button အား နှိပ်ပေးပါ။
၁၈။ ထို့နောက် “Overview” ကို ပြန်နှိပ်ပေးပါ။ အောက်ပါအတိုင်း Default Currency မှာ USD အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားကြောင်း သိရှိပါလိမ့်မည်။
၁၉။ အထက်ပါအဆင့်များပြီးစီးပါက ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် လူကြီးမင်း၏ PayPal အား Email verify ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ PayPal အကောင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော Email အား စစ်ပေးပါ။ “Activate your new PayPal account” ဟူသော Email Subject ဖြင့် Email တစ်စောင် တွေ့ပါလိမ့်မည်။ ထို Email တွင် ပါဝင်သော “Activate My Account” အား နှိပ်ပေးပါ။
၂၀။ PayPal Web Page တစ်ခုတက်လာမည်ဖြစ်ပြီး PayPal password အား မေးပါလိမ့်မည်။ လူကြီးမင်း Paypal အကောင့်၏ Password အား မှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၂၁။ Password မှန်ကန်ပါက နောက်တဆင့်တွင် လူကြီးမင်း အကောင့်၏ Security Question and Answer များအား သတ်မှတ်ပေးရပါလိမ့်မည်။ လူကြီးမင်း ကြိုက်နှစ်သက်သော မေးခွန်း (၂) ခုနှင့် အဖြေ (၂) အား အောက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် “Submit” Button အား နှိပ်ပေးပါ။
၂၂။ အထက်ပါအဆင့်များ ပြီးစီးပါက paypal ပြုလုပ်ခြင်း ဒုတိယအဆင့် ပြီးစီးပြီ ဖြစ်ပါသည်။
၂၃။ PayPal ပြုလုပ်ခြင်း တတိယအဆင့်အနေဖြင့် လူကြီးမင်း၏ Virtual VISA Card နှင့် Paypal အကောင့်အား Link ချိတ်၍ Verify ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၂၄။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် ညာဖက်ထောင့်ရှိ “Link and confirm my credit card” အား နှိပ်ပေးပါ။
၂၅။ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ Confirm ပြုလုပ်ရန် သေချာကြောင်းကို “Continue” Button အား နှိပ်၍ အတည်ပြုပေးပါ။
၂၆။ အတည်ပြုပြီးပါက Paypal မှ လူကြီးမင်း၏ Virtual VISA Card အတွင်းမှ ငွေ အနည်းငယ်မျှ နုတ်ယူသွားပါလိမ့်မည်။ ထို နုတ်ယူသွားသော ငွေအနည်းငယ်ကို လူကြီးမင်း၏ အကောင့် Verify ပြုလုပ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လူကြီးမင်း၏ Paypal Balance ထဲသို့ ပြန်ထည့်သွင်းပေးပါလိမ့်မည်။
၂၇။ ဤအဆင့်ပြီးစီးပါက Account Overview အား ပြန်သွားရန် “Go to Account Overview Page” အား နှိပ်ပေးပါ။ ၂၈။ လူကြီးမင်း Virtual VISA Card ၏ Statement သို့ Paypal မှ 4-digits code တစ်ခုပို့ပေးပါလိမ့်မည်။ ထို PayPal code သည် လူကြီးမင်း၏ VISA card statement တွင် PP*1234 ပုံစံဖြင့် ဖော်ပြပါလိမ့်မည်။ ၂၉။ ထို PayPal code အား လူကြီးမင်း၏ Card Statement ရရှိရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၂ ရက်၊ ၃ ရက်ခန့် စောင့်စားရပါလိမ့်မည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ စသည့် ရုံးပိတ်ရက်ခံသော နေ့များတွင်း ၄ ရက်၊ ၅ ရက်ခန့် ကြာနိုင်ပါသည်။ ၃၀။ Myanmar နိုင်ငံ IP ဖြင့် PayPal အကောင့်ပြုလုပ်ခြင်းအား ယခုအဆင့်အထိ ပြီးစီးပါက Complete Verify မဖြစ်သေးသော်လည်း Paypal စတင် အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ၃၁။ ယခုအဆင့်ထိ ပြီးစီးပြီးပါက Online Website များတွင် ငွေပေးချေခြင်း၊ Online Shopping ပြုလုပ်ခြင်း၊ Online Donation ပြုလုပ်ခြင်း ကိစ္စရပ်များအား အသုံးပြုနိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ၃၂။ အထက်ပါ Online Website များတွင် ငွေသုံးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် PayPal Balance ထဲသို့ ငွေကြိုထည့်ထားစရာ မလိုအပ်ပါ။ ၃၃။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် Virtual VISA Card ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဖြစ်ပါ၍ လူကြီးမင်း၏ Card အတွင်းမှ ငွေအား PayPal မှ အလိုအလောက် နုတ်ယူသွားပါလိမ့်မည်။ ၃၄။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင် လူကြီးမင်း၏ Virtual Visa Card အတွင်းတွင် ငွေလုံလောက်စွာ ရှိရပါမည်။ အနည်းဆုံး မိမိအသုံးပြုလိုသော ငွေထက် $2 USD လောက် ပိုရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ- လူကြီးမင်း PayPal ဖြင့် အသုံးပြုသော ငွေပမာဏသည် $80 ဆိုပါက Virtual VISA Card အတွင်းတွင် အနည်းဆုံး $82 USD လောက် ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၃၅။ သို့သော် Paypal အကောင့်အချင်းချင်း ငွေလွှဲခြင်း (Send Money) လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် Online မှ ငွေလက်ခံခြင်း (Receive Money) လုပ်ဆောင်ချက်များအား ဆောင်ရွက်၍ မရသေးပါ။ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များအား ဆောင်ရွက်လိုပါက ဆက်လက်၍ Complete Verify ဆက်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၃၆။ ထို Complete Verify ပြုလုပ်ရန်အတွက် လူကြီးမင်း၏ ShweMoney Virtual VISA Card Statement အား www.shwemoney.com သို့ ဆက်သွယ်၍ Check Statement ပြုလုပ်ပါ။ Check Statement ပြုလုပ်ရန်အတွက် www.shwemoney.com/check-statement တွင် သွားရောက်၍ Statement Request ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ၃၇။ သတိပြုရန်မှာ - Paypal code သည် လူကြီးမင်း၏ Card Statement အတွင်းသို့ အနည်းဆုံး ၂-၃ ရက်စောင့်ပြီးမှ ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၃၈။ ShweMoney Virtual VISA Card ၀န်ဆောင်မှုမှ လူကြီးမင်း၏ Card Statement အား Email ဖြင့် ပေးပို့ပေးပါလိမ့်မည်။ ထို Statement တွင် PayPal Code ပါလာပါလိမ့်မည်။ ၃၉။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် PayPal Code ရရှိပြီးပါက လူကြီးမင်း၏ PayPal အကောင့်ထဲသို့ Login ၀င်ပါ။ ၄၀။ ထို့နောက် ညာဖက်ထောင့်ရှိ “Confirm my credit card” အား နှိပ်ပေးပါ။
၄၁။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ လူကြီးမင်း၏ PayPal Code –4digits အား ထည့်သွင်ပေးပါ။
၄၂။ ထို့နောက် “Confirm Card” Button အား နှိပ်ပေးပါ။ ၄၃။ PayPal Code ထည့်သွင်းပြီး မှန်ကန်ပါက အောက်ပါအတိုင်း Message တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
Blogger July 20, 2017 at 5:15 AM
Ko Min September 17, 2017 at 9:57 PM
တစ်​ခြားpayment card siteရှိရင်​လည်းမျှ​ဝေ​ပေး​စေချင်​ပါတယ်​
မြန်​မာipနဲ့ ဖွင့်​နိုင်​မဲ့realလည်းဖြစ်​တဲ့site တို့cardတို့​ပေါ့ဗျာ
Blogger November 18, 2017 at 5:07 AM
Visa cardနဲ့ ချိတ် မရဘူးဖြစ်နေတယ်